Koowheel विद्युत स्केटबोर्ड छिटो सुरु गाइड - Jomo प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड
रिमोट रोशनी सुझाव :
1.Charge सूचक चार्ज गर्दा हुनेछ
2.Battery प्रकाश र दिशा सूचक अर्थ मा जडित
3.BLUE मतलब ब्याट्री उच्च लाल छ मतलब ब्याट्री कम
4.Direction सूचक बारी लाल उल्टाउन गर्दा
1 सही ब्याट्री स्थापना, र मोड स्क्रू
2.Turn रिमोट पहिलो र त्यसपछि जडान गर्न बोर्ड सक्रिय।
3. प्रवेग लागि अगाडि पुश, ब्रेक लगान लागि तान्नुहोस् फिर्ता।
4 स्केटबोर्ड ब्याट्री संकेतक, हालतमा मा4रोशनी 100%,
हालतमा मा 3. रोशनी 75%,2रोशनी, अर्थ 50% 1 हल्का मतलब 20% बाँकी छ।
तपाईंको Koowheel बोर्ड शक्ति धेरै छ। सुरक्षित सवारी अनुभव सुनिश्चित गर्न यी सुझावहरू पालन:
सानो वृद्धिमा बटन सार्नुहोस्।
बोर्ड मा एक विस्तृत रुख राख्न,
गुरुत्वाकर्षण को एक कम केन्द्र राख्नुहोस्।
बढाने गर्दा अगाडि झुक्नुहोस्।
ब्रेकिंग गर्दा पछिल्तिर झुक्नुहोस्।
सधै हेलमेट लगाउने।
सफा संग खुला, फ्लैट क्षेत्र फेला
आफ्नो पहिलो सवारी लागि फुटपाथ।
को स्केटबोर्ड र यो मार्गदर्शन को शुरुवात मा चेतावनी पढ्नुहोस्।
अन्य सुरक्षात्मक उपकरण अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ।
बोर्ड र ब्याट्री परिवर्तन पैक चार्ज
चार्ज गर्दा चार्जर मा हल्का लाल हुनेछ, हरियो बारी पूरै चार्ज गरेपछि। ब्याट्रि प्याक परिवर्तन तपाईं अतिरिक्त एक आदेश भने।
को स्क्रू कस गर्न सधैं सम्झना।
नोट: ब्याट्री लामो समय राखिएको छ भने, पूर्ण महिनामा एक पटक चार्ज गर्न, र त्यसपछि replenished आवश्यक छ।
1 यो प्रत्येक सवारी सबै घटक दृढ कडा निश्चित गर्न ट्रक र पाङ्ग्रा जाँच खुलेर अघि rotates निश्चित गर्न पाङ्ग्रा अवस्था जाँच गर्नुहोस्।
तपाईं पाङ्ग्रा वा मोटर बेयरिंग कुनै पनि असामान्य हल्ला सुन्न यदि बोर्ड सवारी छैन
2. सधैँ सुक्खा र ventilated स्थानहरूमा आफ्नो बोर्ड भण्डारण गर्नुहोस्।
पीसीबी बोर्ड र ब्याट्री गर्न क्षति बच्न नम अवसरमा देखि राख्न टाढा।
3. मात्र Koowheel चार्जर प्रयोग गर्नुहोस्। अन्य uncertified चार्जर्स सुरक्षा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ।
ब्याट्री सधैं ठाउँमा 60Celsius डिग्री अन्तर्गत जहाँ तापमान राख्नुपर्छ।
ब्याट्रि हरेक 2-3 महिना चार्ज स्थायी क्षति बच्न एक लामो समय को लागि प्रयोग नगरिएको बाँकी हुँदा।
पूर्ण पहिलो-समय प्रयोगको लागि ब्याट्री चार्ज।
को चार्ज वातावरण सुक्खा र सफा, को चार्ज पोर्ट प्रत्येक शुल्क अघि ड्राई सुनिश्चित राख्नुहोस्।
चार्ज गर्दा कहिल्यै बोर्ड उपेक्षित छोड्न
1 मात्र सुरक्षा समस्या जोगिन बोर्ड लागि मूल भागहरु प्रयोग गर्नुहोस्।
2. ब्रेक को अवस्था परिचित प्राप्त गर्नुहोस् र सिद्ध ब्रेक लगान प्रदर्शन यसलाई निश्चित गर्नुहोस्।
3. तेल बेयरिंग नियमित
4 शुरुआती एक चिल्लो सतह सडक मा सावधानी संग बोर्ड सवारी गर्नुपर्छ।
5 भिजेको र अधिक-ऊबड सडक नगर्नुहोस्।
बिजुली स्केटबोर्ड * 1 ब्याट्री * 1
प्रयोगकर्ता को मार्गदर्शन * 1 चार्जर * 1
एसी पावर कर्ड * 1
लिमिटेड WARRANTY :
Koowheel बोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक वर्ष निर्माताको ग्यारेन्टी द्वारा कवर छ, युरोप मा दुई वर्ष निर्माताको ग्यारेन्टी कारीगरी र भौतिक मा कमजोरीहरू समेट्छ कि। यो पानी मा दुरुपयोग, दुरुपयोग, लापरवाही, दुर्घटना, वा सवारी कारण क्षति कवर गर्दैन। ब्याट्री ग्यारेन्टी छ महिना छ।
सबै फिर्ता र वारेन्टी ढुवानी लागि :
तपाईंको ढुवानी बक्स राख्न गर्नुहोस्। वारंटी अपर्याप्त प्याकेजिङ्ग मा ढुवानी देखि क्षति समावेश गर्दैन।
मृत्यु वा गम्भीर चोट जोखिम
जब तपाईँले Koowheel बोर्ड सवारी, तपाईं नियन्त्रण, टकराव को हानि देखि मृत्यु वा गम्भीर चोट जोखिम र पतन। सुरक्षित सवारी, पढ्न र मार्गदर्शन सबै चेतावनी र निर्देशन पालना गर्नुपर्छ।
सवारी गर्दा सधैं एक टोप लगाउने। पानी, भिजेको सतहहरु, चिप्लो / असमान सतहहरु, ठाडो पहाड, यातायात, चर्किएको, ट्रयाक, रोडा, चट्टानहरु, वा कर्षण को एक हानि कारण र पतन गराउन सक्ने कुनै पनि अवरोध जोगिन। रात सवारी, गरिब दृश्यात्मक, र साना रिक्त स्थानको साथ क्षेत्रमा जोगिन।
चेतावनी: inclines मा, वातावरणमा Koowheel बोर्ड सवारी नगर्नुहोस्, वा गति मा जहाँ तपाईं सुरक्षित एक unpowered longboard नियन्त्रणमा हुन थियो। वायरलेस interferenceor ब्याट्री दोष को घटना मा, तपाईं footbraking जस्तै प्रविधी स्केटिङ वा रोक्न स्लाइड भर गर्न आवश्यक पर्दछ।
चेतावनी: पानी जोगिन!
तपाईंको Koowheel बोर्ड पानी प्रमाण छैन। Elec- tronics, बेयरिंग, र अन्य घटक क्षतिग्रस्त गर्न सकिन्छ। पानी क्षति भएको ग्यारेन्टी अन्तर्गत ढाकिएको छैन।
चेतावनी: दवाब बुँदाहरू!
औंलाहरु, बाल, र बेल्ट, मोटर्स, पाङ्ग्रा, टाढा वस्त्र र सबै सार्दा भागहरु राख्न
चेतावनी: विद्युत तर्साउन जोखिम!
खोल्न वा इलेक्ट्रनिक्स housings, जो पनि ग्यारेन्टी voids संग ट्याम्पर छैन।
responsibly सवारी कृपया र दुवै आफ्नो सुरक्षाको लागि तपाईं वरिपरि ती, आदर र हाम्रो नयाँ खेल र यातायात मोड प्रचार मदत गर्न: तपाईंलाई KOOWHEEL हुन्।